Yan Aung: ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူး.
ကျွန်တော်လည်း အညာအကြောင်းအက်ဆေးရေးရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အညာမှာ ဇာတ်မြုပ်မိလိုက်တယ်. ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူး. ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြည့်များသွားပြီး အပိုင်းလိုက်ခွဲရေးရတာ တော်တော်ဝါသနာထုံသွားခဲ့ပုံ ပေါက်တယ်ဗျ. အဟတ်.
နှစ်သစ်မှာ ခရီးလေးကလည်းထွက်၊ အိမ်သစ်ကိုလည်း ပြောင်း၊ အလုပ်သစ်ကိုလည်း ပြောင်းနဲ့မို့ ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ဂ်ဖက်ကို ပြန်မလှည့်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားခဲ့တယ်. မြို့တော်ကြီးကလည်း အစစအရာရာ ဈေးကြီးတယ်ဗျာ. သက်ပြင်းမောတွေကိုသာ အနိုင်နိုင် မှုတ်ထုတ်ရင်းက လူပျိုကြီးလုပ်တာပဲကောင်းတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မိလိုက်တော့တယ်. (ကြော်ငြာဝင်ကြည့်တာပါ. ဟတ်ဟတ်)
အိမ်သစ်လေးမှာ နေရတာ တော်တော်တော့ စိတ်ချမ်းသာမိတယ်. မနက်ခင်းတွေမှာ အခန်းလေးထဲကို နေရောင်ခြည်က အပြည့်အ၀ကျရောက်တယ်. ယောဂကျင့်ဖို့ ပါဖက်စစ်ကျူရေးရှင်း(Perfect Situation) ပဲလို့တောင် တွေးမိသေး. ဒါပေမယ့် ခုတလော နေထွက်မှာချည်းပဲ အိပ်ယာနိုးနေတော့ အိပ်မက်ထဲမှာပဲ ယောဂကျင့်နေမိတော့တယ်.
ဒီနေ့မနက် အိပ်မက်ကလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်. အိပ်မက်ထဲမှာ အမေက ကျွန်တော့်ကို အိပ်ယာက ထဖို့ အနမ်းလေးတစ်ချက်နဲ့ လာလှုပ်နှိုးတယ်. ပြီးတော့ ကျွန်တော်အိပ်ယာက ထချင်အောင် တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သေးတယ်.
"မီးဖိုချောင်ထဲက စားပွဲပေါ်မှာ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ကောက်ညှင်းငချိတ်ရှိတယ်. ပူပူလေးသွားစားချည်.. ထထထ" တဲ့လေ.
အလူးအလဲထလိုက်တော့ ပထမဦးဆုံး ကုတင်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျပါတယ်.
အရာရာဟာ အိပ်မက်တွေပါပဲလားလို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ ကျွန်တော်က ဟိုးအဝေးကြီးမှာ ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီပဲ...
(အဲဒီ့မှာ ကိုငှက်ကြီးက သီချင်းဆက်ဆို၊ ကျွန်တော်ကတော့ အမေ့ကိုသတိရပြီး ဆက်ငိုပေါ့ဗျာ...)
စောစောစီးစီး အလွမ်းမင်းသားလေးလုပ်လိုက်ရပြီး ရေချိုးခန်းထဲပြေးဝင်၊ သွားတွေ တဗြီးဗြီးတဗျင်းဗျင်းတိုက်၊ ပြီးလည်းပြီးရော မီးဖိုချောင်ထဲဝင်လိုက်တော့ စားပွဲပေါ်မှာ....
လက်သုတ်ပုဝါလေးတစ်ထည်က ကျွန်တော့်ကို မချိပြုံးပြုံးပြလေရဲ့.
စိတ်နာနာနဲ့ အဲဒီ့ အနှီလက်သုတ်ပုဝါကို မီးဖိုဘေးချ၊ အပေါ်က ဒယ်အိုးကို ဇာတ်ခနဲ ဆွဲယူ၊ မီးဖိုကို ချောက်ခနဲဖွင့်၊ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ်က ပလာတာအထုပ်ကို ဗျိခနဲ ဆွဲဖြဲ၊၊ နောက်ထပ် ၅ မိနစ်လောက်နေတော့ လက်ဖက်ရည်လေးတစ်ခွက်နဲ့ ပလာတာနှစ်ချပ်ကို ဒူးလေးနှံ့ပြီး မနက်စာကို မြိန်ရည်ယှက်ရည် သုံးဆောင်နေလိုက်ပါတော့တယ်.
"ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ...." လို့ ပြန်မေးမိတော့
လောလောဆယ်မှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ်တိုင်ကြော်စားတဲ့ ပလာတာက အိပ်မက်ထဲမှာ အမေလာပေးတဲ့ ကောက်ညှင်းငချိတ်ပေါင်းထက် လက်တွေ့ပိုကျတယ်.
မုတ်ဆိတ်မွေးလေးတစ်မျှင်နှစ်မျှင်ကို ပွတ်သပ်ရင်း၊ မျက်လုံးလေးမှေးရင်းက ပြန်ဖြေမိလိုက်တာက...
"ပလာတာ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ" လို့....
ပလာတာ ဓါတ်ကျနေပုံပဲ...း)
အသစ်တင်လို့ အညာအကြောင်းမှတ်တယ် ... လက်စသတ်တော့ ပလာတာကိုးးးးး
မရလို့ လူပျိုကြီးလုပ်တာ မပြောဘဲ ဈေးကြီးလို့လို့ အကြောင်းပြသွားတာလေး သဘောကျသွားတယ်း)
ဘာရယ်မဟုတ်ရေးထားတယ်ဆိုလို့ ဘာမှန်းမသိ လာဖတ်သွားပါတယ်..
ဒီနေ့ ရွေးဖတ်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တိုင်း ပလာတာနဲ့ ပဲ တိုးနေပါလား ကိုပလာတာရယ်. :D